Beelaha Muqdisho oo DF Somalia u diray baaq ka dhan ah beegsiga lagu hayo dadkooda iyo hantidooda. -
HomeArimaha bulshadaBeelaha Muqdisho oo DF Somalia u diray baaq ka dhan ah beegsiga lagu hayo dadkooda iyo hantidooda.
Beelaha Muqdisho oo DF Somalia u diray baaq ka dhan ah beegsiga lagu hayo dadkooda iyo hantidooda.
April 10, 2019 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Bulshada reer Muqdisho iyo Labada Shabeelle oo isku duuban ayaa waxay u dirayaan baaq hoggaanka dalka, Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha.
Og: Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya
Og: Ra’iisalwasaaraha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya
Og: Wasiirka Arrimaha gudaha
Og: Wasiirka Amniga
Waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey isa soo tarayey beegsiga iyo gooni u faquuqa dadka deegaanka reer Muqdisho, Reer Muqdisho waa dadka gogosha u dhigay dowladnimada, waa dadka keliya ee bixiya cashuurta iyo dhaqaalaha dowladdu ku hawlgasho waa dadka dhibaatada ugu badani ka soo gaartay dowladnimada, waana dadkii mudnaa in si gaar ah loo maamuuso.
Waxaa socda dil, xarig boob iyo weliba hanjabaad loo marinayo bulshada reer Muqdisho warbaahinta, reer Muqdisho ciddi kuma qasbin inay dowladnimada taageeraan ee iyaga ayaa doortey, Reer Muqdisho iyagoo intaas oo dhib ah qaba, haddana waxay weli xeerinayaan Soomaalinimada iyo midnimada in wax ka wanaagsani aysan jirin.
Waxaan uga baaqeynaa Madaxda dalka inay ka feejignaadaan wax kasta oo keeni kara qalalaase iyo iska hor imaad dadweynaha iyo dowladda ah.
Dowladdu maaha inay dadka taageersan ee soo dhaweeyey u xoog iyo awood yeelato, ee waa inay ula dhaqantaa in xil ka saaranyahay ilaalintooda nafeed iyo midooda xaquuqeed.
Teer iyo intii la soo magacaabay guddoomiyaha Gobolka Banaadir, waxaa dadweynaha iyo bulshada reer Muqdisho ku socday faquuq iyo beegsi aan loo aabbe yeelin:
Waxaa laga xayuubiyey dhammaan xilalkii ay ka hayeen gobolka iyo degmooyinka iyada oo aysan jirin eed iyo arrin lagu sababeeyey ee keliya lagu diiday beesha iyo deegaanka uu ka dhashay.
Waxaa la burburiyey dhismayaal iyo agab ay lahaayeen iyada oo aan loo marin hannaan siyaasadeed iyo hab sharci ah.
Waxaa la weeraray deegaamo iyo dadweyne dhulkoodii awood iyo xoog looga qaaday
Waxaa la abaabulay tiroba ka saddex jeer dagaallo ka dhan ah dadweynaha reer Muqdisho.
Intaas oo dhibaato ah waxay ka soo fulleysay dhammaantood xafiiska guddoomiyaha gobolka banaadir.
Mudane Madaxweyne guddoomiyaha gobolka Banaadir kuma iman wada tashi iyo is afgarad dadka deegaanka iyo adiga idin dhexmaray ee wuxuu ku yimid xulashadaada, haddii uu dhibaato geystona waa mid adiga saameynteedu ku soo gaarayso, waayo maaha dadka xushay annaga ee waxaa soo xushay adiga.
Haddii aan wax laga qaban dhibaatooyinka baaxada leh ee uu abaabulayo isaga iyo kooxdiisa, waxaa iman doonta in hadhoow nabaddu meel aysan jirin laga helayn laga doono.
Ma nihin dad dhibaato u ban baxay ee waxaan nahay dad in la dhibo loo balamay, waa in Sooyaalka wax lagu qaybsadaa.Bulshada reer Muqdisho dhibka maanta cadowga soomaaliyeed ee Alshabaab ku hayo mid kale in loogu daraahi waa Dherigii labada dhinac ka gubtay.
Ugu dambeyn waxaan uga baaqeynaa dowladdu inay muddo saddex maalmood ah kaga soo jawaabto baaqaas, lagana hor wareejiyo bulshada Guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Waxaannu ku baaqaynaa inta Nabaddu joogtaa ninba laba nin le’egyahay, waa inaysan dowladnimada iyo hannaanka maamul eersan qof iyo laba fidne wade ah oo doonaya in dalku halkuu shalay ka yimid dib ugu noqdo.
Baaqaan waxaa si wadajir ah usoo saaray
Waxgaradka iyo aqoonyahanka Beesha Mudullood dalka iyo dibadda.